Marketing amin'ny fofona: statistika, science science, ary ny indostria | Martech Zone
Zoma, Desambra 11, 2020 Sabotsy, Martsa 6, 2021 Douglas Karr
Isaky ny mody amin'ny andro be atao aho, indrindra raha nandany fotoana be teny an-dalana aho, ny fanaovan-jiro labozia no zavatra voalohany ataoko. Iray amin'ireo tiako indrindra ny labozia an-dranomasina masinina antsoina hoe Tony. Minitra vitsy taorian'ny nandrehako azy dia tsara ny foko ary… milamina aho.
Ny siansa manitra
Mahavariana ny siansa ao ambadiky ny fofona. Mahalala ny olombelona mihoatra ny iray tapitrisa tapitrisa fofona samihafa. Rehefa mitsoka isika dia manangona ny molekiola ny orontsika ary mihalefaka amin'ny fonosana manify ao anatin'ny lohan'ny orona isika. Ny volo kely (cilia) dia mirehitra toy ny nerves ary mandefa famantarana any amin'ny atidohantsika amin'ny alàlan'ny olfactory jiro. Misy fiantraikany amin'ny faritra efatra amin'ny atidohantsika izany - ny fihetsem-po, ny antony manosika ary ny fitadidy.
Antontan'isa momba ny varotra siantifika
Ny olfaction, na ny fahatsapana fofona, dia inoana fa ny fahanterantsika tranainy indrindra.
Ny orona dia manana receptor fofona 10 tapitrisa, misy karazana receptor fofona 50 eo ho eo.
Isaky ny 30 ka hatramin'ny 60 andro dia manavao ny sela manitrao.
Ny fofonao amin'ny faran'ny atidoha no alainao fa tsy ny oronao.
Ny porofo momba ny menaka manitra dia hatramin'ny 4,000 taona lasa izay.
Androstenol dia pheromone ary rehefa eo amin'ny hatsembohana vaovao dia azo sintomina ny vehivavy. Rehefa miharihary amin'ny rivotra izy dia mihodina ho androstenone ary tsy mahasarika (fantatra koa amin'ny fofon'ny vatana).
Ny fofon'ny pie voatavo sy lavender dia hita fa mampitombo ny fikorianan'ny rà (midina any) amin'ny lehilahy hatramin'ny 40%.
Matetika ny fofona dia manentana ny fihetsem-po ary mamporisika ny fahatsiarovana alohan'ny hamaritana azy ireo akory. Izy ireo koa dia miteraka fientanam-po mahatsiravina… miaraka amin'ireo olona tratran'ny aretina vokatry ny fihenjanana aorian'ny trauma (PTSD).
Inona ny atao hoe Marketing Scent?
Scent Marketing dia karazana marketing sensory kendrena amin'ny fahatsapana olfactory. Ny Scent Marketing dia mampiditra ny maha-izy azy ny orinasa, ny marketing, ny mpihaino kendrena ary mamolavola paikady olfactory izay manamafy ireo soatoavina ireo. Matetika izy io dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny hanitra amina tranombarotra antsinjarany mba hitaomana ny fihetsiky ny mpanjifa.
Toy ny amin'ny fahatsapana rehetra, ny fampidirana ireo fahatsiarovana ao amin'ny dia mividy dia afaka mandrisika ny fifamatorana ary handroaka ny mpanjifa na ny orinasa hiova. Ny fofona milamina sy mampitony ao anatin'ny fivorian'ny orinasa dia afaka mampitony ny olona. Ny hanitra manosika fahatsiarovana mahafinaritra ho an'ny mpanjifa dia afaka manao traikefa fividianana sambatra kokoa.
Ity misy horonan-tsary manazava tsara ScentAir, mpitarika amin'ny varotra fofona, diffusers ara-barotra, ary ny indostrian'ny fofona ambiny.
Ny raharaham-barotra amin'ny fivarotana hanitra
Izay mitondra antsika any amin'ny indostrian'ny marketing. Ireo mpivarotra antsinjarany izao dia mampiasa vola amin'ny rafitra fanaterana fofona manefy ny toe-tsain'ny mpanjifa sy manentana ny fihetsem-po, ny fividianana fividianana ary ny tsy fivadihan'ny mpanjifa. Araka ny lahatsoratra Shopify iray, ny varotra fofona dia nitombo ho lasa orinasa amina miliara dolara izay mandroso indostrialy maro.
Ny fanadihadiana iray notontosain'i Nike dia nampiseho fa ny fampidirana fofona any amin'ny fivarotan'izy ireo dia nitombo ny fikasana hividy hatramin'ny 80 isan-jato, raha tamin'ny fanandramana iray hafa tao amin'ny tobin-tsolika iray misy mini-mart mifatotra aminy kosa, ny fipoahan'ny fofon'ny kafe dia nahita ny fividianana zava-pisotro nampitomboin'ny 300 isan-jato.
Ny fofon'ny varotra: Ahoana ny fampiasan'ny orinasa ny hanitra hivarotana ny vokatr'izy ireo
Ary ity misy infographic tsara avy amin'ny FragranceX, Ahoana no hifehezana ny marketing amin'ny hanitra, ao anatin'izany ny tombotsoan'ny marketing amin'ny fofona sy ny karazana fofona ary ny fihetsiky ny mpanjifa.
Fivarotana fofona (fantatra koa amin'ny anarana hoe marketing aroma, marketing olfactory na marketing ambient scent) dia fampiasa amin'ny fofona manitra mahafinaritra hanatsarana ny marika amina orinasa iray, hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa ary hampitombo ny varotra. Ny marketing amin'ny fofona dia mety hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tongotry ny mpanjifa ihany koa ary hisy fiantraikany amin'ny fotoana lanin'ny mpanjifa amin'ny fivarotana.
Leanna Serras, Ahoana no hifehezana ny marketing amin'ny hanitra
Tags: indostrian'ny fividianana ambientvarotra manitravatana oderdiffusers ara-barotramanitrafofonaolfactionolfactoryvarotra olfactoryditin-kazo manitraptsdhanitrymarketing amin'ny hanitrascentairinona ny marketing amin'ny hanitra